ဒူးနာ ရောဂါကို သက်သာစေမည့် လွယ်ကူသော ဆေးနည်း – WunYan
ဒူးနာ ရောဂါကို သက်သာစေမည့် လွယ်ကူသော ဆေးနည်း
ကျွန်တော်သည် ဒူးနာဝေဒနာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်က ကားတိုက်ခံရစဉ် ပေါင်သုံးပိုင်း ကျိုးသည်နှင့်အတူ ဒူးကိုပါ အနည်းငယ် ထိခိုက်မိပါသည်။ ထိုစဉ်မှစ၍ ယနေ့တိုင် ဒူးသည် အနည်းငယ်မျှ မသိမသာ ရောင်ရမ်းနေသလို အတန်ငယ်လည်း တင်းနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဒူးနာပျောက်ဆေးမျိုးစုံအား သုံးစွဲခြင်း လေ့လာဖော်စပ်ခြင်းများ ပြုခဲ့ပါသည်။
ဒူးနာခြင်းသည် ဒီဘက်ခေတ်၌ အတော်လေး အဖြစ်များနေသည်ကို သတိထားမိသည်။ မိမိမှ အလှူအတန်းလုပ်တိုင်း အခန်းအနား တစ်ခုခုလုပ်တိုင်း ဒူးနာတတ်သည့် သက်ကြီးရွယ်အို..ဝေဒနာရှင်တို့အတွက် အဆင်ပြေစေရန် ကုလားထိုင်များကို သီးသန့်စီစဉ်ပေးနေရပါသည်။ တချို့လည်း ဒူးနာတာကို အကြောင်းပြု၍ မလာရောက်နိုင်ပါကြောင်း ဖုံးဖြင့် တောင်းပန်ကြပါသည်။
ခက်သည်က ဒူးနာရခြင်း၏ အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေက များလှပါသည်။ အရိုးမှနာခြင်း အရွတ်မှနာခြင်း ချင်ဆီမှနာခြင်း ကြွက်သားမှနာခြင်း အကြောမှနာခြင်း အဆစ်မှနာခြင်း အပူငုတ်၍နာခြင်း တီဘီရောဂါ ကင်ဆာရောဂါ၊ လေးဘက်နာကြောင့် နာခြင်း လထိခိုက်ဒဏ်ရာရရာမှ..ဒဏ်ဖြစ်သွား၍ နာခြင်း..လေးဘက်နာရောဂါကြောင့်နာခြင်း ဂေါက်ရောဂါကြောင့်နာခြင်း ယူးရစ်အက်ဆစ် လွန်ကဲနေ၍နာခြင်း စသဖြင့် အကြောင်းရင်းတွေက စုံလှပါသည်။
ထို့ကြောင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်က ကောင်းသည်ဟု ရည်ညွန်းသော်လည်း နောက်တစ်ဦးအတွက်တော့. မထူးခြားဖြစ်နေတတ်သည်။ အနာနဲ့ဆေးမတွေ့၍ လမ်းလွဲနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော အနှစ်၂၀ကျော်က အလွန်လွယ်ကူ၍ ကုန်ကျမှုနည်းပါးသော ဒူးနာပျောက်ဆေးနည်း တစ်လက်ကို နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖတ်ဘူးခဲ့သည်။ ရေးသူက ကျောင်းဆရာမဆိုတော့ ပို၍သဘောကျပါသည်။ သူကတော့ တစ်သက်လုံး မပျောက်တော့ဘူးထင်တဲ့ ဒူးနာ ဒီဆေးနဲ့မှ ပျောက်တော့သည်ဟု ညွှန်းဆိုထားသဖြင့် မှတ်သားထားသည်နှင့်..အတူ…ဖော်စပ်လိုက်ပါတော့သည်။
ဆေးဖော်ထားပြီး ၃-၄ နှစ်အကြာမှာ ဝေဒနာရှင်တစ်ဦးနဲ့တွေ့ပါသည်။ သူကတော့ မိမိအိမ်သို့လာလည်သော အသက် ၆၅ နှစ်ခန့်ရှိ အမျိုးသမီးကြီးဖြစ်သည်။ ဇာတိက သုံးဆယ်မြို့ကပါ။ သူ့သမီးအလုပ်ဗဟိုစာရင်းမှာ တာဝန်ကြတော့ မိမိတို့အိမ်အနီးမှာ တိုက်ခန်းဝယ်ပြီး သားအမိနှစ်ယောက် အတူနေကြသည်။ ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ တစ်ရုံးထဲမို့ မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီး လာလည်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သူဒူးနာနေတာက ကြာပြီ။ ဘာဆေးနဲ့မှ..မပျောက်။ ခုတော့.. အင်္ဂလိပ်လိမ်းဆေး လိမ်းနေသည်။ ဒီဆေးက သွားတိုက်ဆေးကဲ့သို့ ညှစ်ထုတ်ရသော ခရင်မ်ဖြစ်သည်။ သူက ( ဆေးပူနဲ့ လုံးဝမတည့် ) ဟုသိရပါသည်။ ဆေးစမ်းချင်သောမိမိက အသင့်ဖော်ထားတဲ့ဆေးကို ပေးလိုက်သည်။ ဆေးကလည်း နှစ်ချို့နေတော့ အဆီတွေတက်နေပြီး ရေနွေးကြမ်းရောင်သို့ပင် ပြောင်းနေပါပြီ။
ဆယ်ရက်လောက်ရှိတော့ တစ်မနက်မှာ သမီးဖြစ်သူက ငါးဆင့်ချိုင့်ကြီးဆွဲပြီး အိမ်ထဲကို ဝင်လာပါသည်။ မောင်နှတွေလို ခင်နေတော့လည်း ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ မီးဖိုခန်းထဲကို တန်းဝင်သွားပြီးပါလာတဲ့။ ကြာဆံကျော်တွေကို ပွဲပြင်ပြီး ဇွန်းခက်ရင်းနဲ့တကွ မိမိရှေ့သို့ လာချပါတော့သည်။ မိမိလည်း ဘုမသိဘမသိမို့ ကြောင်စီစီကြည့်ယင်း ခင်ဗျားးဘာအရူးထတာလည်း စွံ့သွားပြီလားဟု စမိသည်။
သူမက အသက်လေးဆယ်လောက်ရှိတဲ့ အပျိုကြီးဖြစ်ပါသည်။ သည်တော့မှ သူကရှင်းပြသည်။ မိမိပေးလိုက်သောဆေးနဲ့ သူ့အမေရဲ့ ဒူးနာသက်သာလို့ ရွှေတိဂုံဘုရားကိုပင် စောင်းတန်းက တက်၍ဖူးနိုင်သွားသဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်သည့်အနေနဲ့ နင်ကိုယ်တိုင် ကျွေးချေဟု မှာလိုက်ကြောင်း သိရပါသည်။ မိမိလည်း ဆေးအခြေအနေသိလို၍ သူမအပြန်မှာ တပါတည်းလိုက်သွားပြီး ဝေဒနာရှင်ကို (ဗျူး)ခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း သိခွင့်ရလိုက်ပါသည်။
ဆေးယူသွားတဲ့ညမှာ အိပ်ယာဝင်ခါနီးတော့ ထမိန်ကို ခါးထောင်းကြိုက်ပြီး ပေါင်ရင်းမှ ချေမျက်စေ့ထိ ရွဲနေအောင် လိမ်းပြီး အသားထဲ စိမ့်ဝင်သည်အထိ နာနာပွတ်သည်ဟုဆိုသည်။ တရေးအနိုးမှာ ဆီးထသွားတော့ အရင်ကနဲ့မတူ အထိုင်အထတွေက ပေါ့ပါးသွက်လက်နေတာမို့ ငါတော့ဒီဆေးနဲ့ တည့်ပြီလို့မှတ်ယူယင်း ထိုညက စိတ်ချမ်းသာစွာ အိပ်စက်လိုက်သည်။
နောက်နေ့တွေမှာလည်း နေ့စဉ်မှန်မှန် လိမ်းသည်နှင့်အတူ ( မိမိကမညွှန်းဘဲ သူ့သဘောနဲ့သူ ) အနည်းငယ်လောက် သောက်သည်ဟူပါ၏။ တပတ်လောက်ကြာတော့ ဒူးနာက သိသိသာသာ ကောင်းနေတာကြောင့် သမီးကိုခေါ်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ မဖူးရတာကြာတဲ့ ရွှေတိဂုံကို စောင်းတန်းကတက်ပြီးဖူးရာ အဆင်ပြေလာခဲ့သည်ဟု ပြောပါသည်။
တသက်လုံး မဖူးရတော့ဟု ယူဆထားတဲ့ ရွှေတိဂုံကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖူးလိုက်ရလို့ မောင်မင်းကြီးသားကို ကျေးဇူးဆပ်ခိုင်းလိုက်တာပါဟု အားရဝမ်းသာ ပြောရှာပါသည်။ ခုချိန်မှာတော့ သားအမိနှစ်ဦးစလုံး ကွယ်လွန်သွားကြပါပြီ။
တောရှောက်ခါးသီး (ခ) ရှောက်ဘီလူးအား အလယ်မှ ထက်ချမ်းခွဲပါ။ ရိုးရိုးရှောက်သီးလည်း ရပါသည်။ ကြက်သွန်နီကို အကွင်းလိုက် ထူထူလေးလှီးပြီး ရှောက်သီးကြားမှာ ညှပ်ပါ။ ကွာမသွားစေရန်အတွက် ဝါးချမ်းတုတ်ချောင်းနဲ့ ကန့်လန့်ဖြတ်ထိုးလိုက်ပါ။ ရှောက်သီးတွေကို နူးအိသွားအောင် ရေခန်းပြုတ်ပါ။
ရလာတဲ့ရှောက်သီးကို အတုံးငယ်ငယ်လေးတွေ စိတ်ပြီး အဝကြယ် ဖန်ပုလင်းထဲကိုထည့်ပြီး မီးတောက်အရက်နဲ့ စိမ်ထားပါ။ မီးတောက်အရက် အဆင်မပြေယင် အရက်ပြင်းပြင်းကို အရက်ပျံရောပြီးသုံးလို့ ရပါတယ်။ ပုလင်းကို တစ်လလောက် နေပူထဲမှာ ပစ်ထားလိုက်ပါ။ ဒီနောက်တော့ သုံးလို့ ရပါပြီ။ ကြာလေ ကောင်းလေပါပဲ။
ဒူးနာသူတိုင်း (မပျောက်မှာ) ကတော့ သေချာပါသည်။ ကုသိုလ်ထူးလို့ အနာနဲ့ ဆေးတည့်သူမှာတော့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။ အရိုးပါးနေသူ အရွတ်ပဲ့နေသူတွေကတော့ ဒူးခေါင်းအစားထိုးမှ ရပါတယ်။ ကုန်ကျစားရိတ်ကတော့ ဒူးတစ်ဘက်ကို သိန်း ၈၀ လောက်ရှိပါတယ်။
ဆေးပူကြိုက်သူတွေအတွက်တော့ ပရုတ်လေးပါးဆေး (ခ) မင်းလေးပါးဆေးက မဆိုးပါဘူး။ နီးစပ်ရာ ဘယဆေးဆိုင်တွေမှာ ပရုတ်လေးပါး တစ်ကျပ်သားစီ ပေးပါဆိုရင် သူတို့နားလည်ပါတယ်။ ပရုတ်လေးပါးဆိုတာက ပရုတ် မင်သော် သိုင်းမောနဲ့ ဖုန်းမသိမ်ပါ။ တစ်မျိုး တစ်ထုတ်နှုံးနဲ့ လေးထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အခဲတွေပါ။ အိမ်ရောက်မှ အဝကြယ်တဲ့ ပုလင်းထဲကို ရောထည့်လိုက်ပါ။ ခဏကြာရင် အရည်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ သူက ပူပါတယ်။ ပူလွန်းတယ်ထင်ယင် မုံညင်းဆီကို လိုသလောက်ရောပေးပါ။ စုစုပေါင်း လေးကျပ်သားကို သုံးထောင်ကျော်လောက်ကျပါမယ်။ အဆီတွေမို့ တော်တော်ကြာကြာ သုံးရပါတယ်။
မိမိ၏အတွေ့အကြုံကို မျှဝေလို့ ဆေးဒါနပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒူးနာကင်းဝေး ထိုင်ထ မလေးစေရန် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။
ကြှနျတျောသညျ ဒူးနာဝဒေနာရှငျတဈဦး ဖွဈပါသညျ။ ၁၉၉၅ ခုနှဈက ကားတိုကျခံရစဉျ ပေါငျသုံးပိုငျး ကြိုးသညျနှငျ့အတူ ဒူးကိုပါ အနညျးငယျ ထိခိုကျမိပါသညျ။ ထိုစဉျမှစ၍ ယနတေို့ငျ ဒူးသညျ အနညျးငယျမြှ မသိမသာ ရောငျရမျးနသေလို အတနျငယျလညျး တငျးနပေါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဒူးနာပြောကျဆေးမြိုးစုံအား သုံးစှဲခွငျး လလေ့ာဖျောစပျခွငျးမြား ပွုခဲ့ပါသညျ။
ဒူးနာခွငျးသညျ ဒီဘကျခတျေ၌ အတျောလေး အဖွဈမြားနသေညျကို သတိထားမိသညျ။ မိမိမှ အလှူအတနျးလုပျတိုငျး အခနျးအနား တဈခုခုလုပျတိုငျး ဒူးနာတတျသညျ့ သကျကွီးရှယျအို..ဝဒေနာရှငျတို့အတှကျ အဆငျပွစေရေနျ ကုလားထိုငျမြားကို သီးသနျ့စီစဉျပေးနရေပါသညျ။ တခြို့လညျး ဒူးနာတာကို အကွောငျးပွု၍ မလာရောကျနိုငျပါကွောငျး ဖုံးဖွငျ့ တောငျးပနျကွပါသညျ။
ခကျသညျက ဒူးနာရခွငျး၏ အခွခေံအကွောငျးရငျးတှကေ မြားလှပါသညျ။ အရိုးမှနာခွငျး အရှတျမှနာခွငျး ခငျြဆီမှနာခွငျး ကွှကျသားမှနာခွငျး အကွောမှနာခွငျး အဆဈမှနာခွငျး အပူငုတျ၍နာခွငျး တီဘီရောဂါ ကငျဆာရောဂါ၊ လေးဘကျနာကွောငျ့ နာခွငျး လထိခိုကျဒဏျရာရရာမှ..ဒဏျဖွဈသှား၍ နာခွငျး..လေးဘကျနာရောဂါကွောငျ့နာခွငျး ဂေါကျရောဂါကွောငျ့နာခွငျး ယူးရဈအကျဆဈ လှနျကဲနေ၍နာခွငျး စသဖွငျ့ အကွောငျးရငျးတှကေ စုံလှပါသညျ။
ထို့ကွောငျ့ တဈဦးတဈယောကျက ကောငျးသညျဟု ရညျညှနျးသျောလညျး နောကျတဈဦးအတှကျတော့. မထူးခွားဖွဈနတေတျသညျ။ အနာနဲ့ဆေးမတှေ့၍ လမျးလှဲနခွေငျးဖွဈပါသညျ။
လှနျခဲ့သော အနှဈ၂၀ကြျောက အလှနျလှယျကူ၍ ကုနျကမြှုနညျးပါးသော ဒူးနာပြောကျဆေးနညျး တဈလကျကို နက်ခတ်တရောငျခွညျမဂ်ဂဇငျးတှငျ ဖတျဘူးခဲ့သညျ။ ရေးသူက ကြောငျးဆရာမဆိုတော့ ပို၍သဘောကပြါသညျ။ သူကတော့ တဈသကျလုံး မပြောကျတော့ဘူးထငျတဲ့ ဒူးနာ ဒီဆေးနဲ့မှ ပြောကျတော့သညျဟု ညှနျးဆိုထားသဖွငျ့ မှတျသားထားသညျနှငျ့..အတူ…ဖျောစပျလိုကျပါတော့သညျ။
ဆေးဖျောထားပွီး ၃-၄ နှဈအကွာမှာ ဝဒေနာရှငျတဈဦးနဲ့တှပေ့ါသညျ။ သူကတော့ မိမိအိမျသို့လာလညျသော အသကျ ၆၅ နှဈခနျ့ရှိ အမြိုးသမီးကွီးဖွဈသညျ။ ဇာတိက သုံးဆယျမွို့ကပါ။ သူ့သမီးအလုပျဗဟိုစာရငျးမှာ တာဝနျကွတော့ မိမိတို့အိမျအနီးမှာ တိုကျခနျးဝယျပွီး သားအမိနှဈယောကျ အတူနကွေသညျ။ ဇနီးဖွဈသူနဲ့ တဈရုံးထဲမို့ မိတျဆှဖွေဈပွီး လာလညျကွခွငျးဖွဈပါသညျ။
သူဒူးနာနတောက ကွာပွီ။ ဘာဆေးနဲ့မှ..မပြောကျ။ ခုတော့.. အင်ျဂလိပျလိမျးဆေး လိမျးနသေညျ။ ဒီဆေးက သှားတိုကျဆေးကဲ့သို့ ညှဈထုတျရသော ခရငျမျဖွဈသညျ။ သူက ( ဆေးပူနဲ့ လုံးဝမတညျ့ ) ဟုသိရပါသညျ။ ဆေးစမျးခငျြသောမိမိက အသငျ့ဖျောထားတဲ့ဆေးကို ပေးလိုကျသညျ။ ဆေးကလညျး နှဈခြို့နတေော့ အဆီတှတေကျနပွေီး ရနှေေးကွမျးရောငျသို့ပငျ ပွောငျးနပေါပွီ။
ဆယျရကျလောကျရှိတော့ တဈမနကျမှာ သမီးဖွဈသူက ငါးဆငျ့ခြိုငျ့ကွီးဆှဲပွီး အိမျထဲကို ဝငျလာပါသညျ။ မောငျနှတှလေို ခငျနတေော့လညျး ဘာမပွောညာမပွောနဲ့ မီးဖိုခနျးထဲကို တနျးဝငျသှားပွီးပါလာတဲ့။ ကွာဆံကြျောတှကေို ပှဲပွငျပွီး ဇှနျးခကျရငျးနဲ့တကှ မိမိရှသေို့ လာခပြါတေော့သညျ။ မိမိလညျး ဘုမသိဘမသိမို့ ကွောငျစီစီကွညျ့ယငျး ခငျဗြားးဘာအရူးထတာလညျး စှံ့သှားပွီလားဟု စမိသညျ။
သူမက အသကျလေးဆယျလောကျရှိတဲ့ အပြိုကွီးဖွဈပါသညျ။ သညျတော့မှ သူကရှငျးပွသညျ။ မိမိပေးလိုကျသောဆေးနဲ့ သူ့အမရေဲ့ ဒူးနာသကျသာလို့ ရှတေိဂုံဘုရားကိုပငျ စောငျးတနျးက တကျ၍ဖူးနိုငျသှားသဖွငျ့ ကြေးဇူးဆပျသညျ့အနနေဲ့ နငျကိုယျတိုငျ ကြှေးခဟြေု မှာလိုကျကွောငျး သိရပါသညျ။ မိမိလညျး ဆေးအခွအေနသေိလို၍ သူမအပွနျမှာ တပါတညျးလိုကျသှားပွီး ဝဒေနာရှငျကို (ဗြူး)ခဲ့ရာ အောကျပါအတိုငျး သိခှငျ့ရလိုကျပါသညျ။
ဆေးယူသှားတဲ့ညမှာ အိပျယာဝငျခါနီးတော့ ထမိနျကို ခါးထောငျးကွိုကျပွီး ပေါငျရငျးမှ ခမြေကျြစထေိ့ ရှဲနအေောငျ လိမျးပွီး အသားထဲ စိမျ့ဝငျသညျအထိ နာနာပှတျသညျဟုဆိုသညျ။ တရေးအနိုးမှာ ဆီးထသှားတော့ အရငျကနဲ့မတူ အထိုငျအထတှကေ ပေါ့ပါးသှကျလကျနတောမို့ ငါတော့ဒီဆေးနဲ့ တညျ့ပွီလို့မှတျယူယငျး ထိုညက စိတျခမျြးသာစှာ အိပျစကျလိုကျသညျ။
နောကျနတှေ့မှောလညျး နစေ့ဉျမှနျမှနျ လိမျးသညျနှငျ့အတူ ( မိမိကမညှနျးဘဲ သူ့သဘောနဲ့သူ ) အနညျးငယျလောကျ သောကျသညျဟူပါ၏။ တပတျလောကျကွာတော့ ဒူးနာက သိသိသာသာ ကောငျးနတောကွောငျ့ သမီးကိုချေါပွီး နှဈပေါငျးမြားစှာ မဖူးရတာကွာတဲ့ ရှတေိဂုံကို စောငျးတနျးကတကျပွီးဖူးရာ အဆငျပွလောခဲ့သညျဟု ပွောပါသညျ။
တသကျလုံး မဖူးရတော့ဟု ယူဆထားတဲ့ ရှတေိဂုံကို မကျြမွငျကိုယျတှဖေူ့းလိုကျရလို့ မောငျမငျးကွီးသားကို ကြေးဇူးဆပျခိုငျးလိုကျတာပါဟု အားရဝမျးသာ ပွောရှာပါသညျ။ ခုခြိနျမှာတော့ သားအမိနှဈဦးစလုံး ကှယျလှနျသှားကွပါပွီ။
တောရှောကျခါးသီး (ခ) ရှောကျဘီလူးအား အလယျမှ ထကျခမျြးခှဲပါ။ ရိုးရိုးရှောကျသီးလညျး ရပါသညျ။ ကွကျသှနျနီကို အကှငျးလိုကျ ထူထူလေးလှီးပွီး ရှောကျသီးကွားမှာ ညှပျပါ။ ကှာမသှားစရေနျအတှကျ ဝါးခမျြးတုတျခြောငျးနဲ့ ကနျ့လနျ့ဖွတျထိုးလိုကျပါ။ ရှောကျသီးတှကေို နူးအိသှားအောငျ ရခေနျးပွုတျပါ။
ရလာတဲ့ရှောကျသီးကို အတုံးငယျငယျလေးတှေ စိတျပွီး အဝကွယျ ဖနျပုလငျးထဲကိုထညျ့ပွီး မီးတောကျအရကျနဲ့ စိမျထားပါ။ မီးတောကျအရကျ အဆငျမပွယေငျ အရကျပွငျးပွငျးကို အရကျပြံရောပွီးသုံးလို့ ရပါတယျ။ ပုလငျးကို တဈလလောကျ နပေူထဲမှာ ပဈထားလိုကျပါ။ ဒီနောကျတော့ သုံးလို့ ရပါပွီ။ ကွာလေ ကောငျးလပေါပဲ။
ဒူးနာသူတိုငျး (မပြောကျမှာ) ကတော့ သခြောပါသညျ။ ကုသိုလျထူးလို့ အနာနဲ့ ဆေးတညျ့သူမှာတော့ အဆငျပွပေါလိမျ့မညျ။ အရိုးပါးနသေူ အရှတျပဲ့နသေူတှကေတော့ ဒူးခေါငျးအစားထိုးမှ ရပါတယျ။ ကုနျကစြားရိတျကတော့ ဒူးတဈဘကျကို သိနျး ၈၀ လောကျရှိပါတယျ။
ဆေးပူကွိုကျသူတှအေတှကျတော့ ပရုတျလေးပါးဆေး (ခ) မငျးလေးပါးဆေးက မဆိုးပါဘူး။ နီးစပျရာ ဘယဆေးဆိုငျတှမှော ပရုတျလေးပါး တဈကပျြသားစီ ပေးပါဆိုရငျ သူတို့နားလညျပါတယျ။ ပရုတျလေးပါးဆိုတာက ပရုတျ မငျသျော သိုငျးမောနဲ့ ဖုနျးမသိမျပါ။ တဈမြိုး တဈထုတျနှုံးနဲ့ လေးထုတျပေးပါလိမျ့မယျ။ အခဲတှပေါ။ အိမျရောကျမှ အဝကွယျတဲ့ ပုလငျးထဲကို ရောထညျ့လိုကျပါ။ ခဏကွာရငျ အရညျဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။ သူက ပူပါတယျ။ ပူလှနျးတယျထငျယငျ မုံညငျးဆီကို လိုသလောကျရောပေးပါ။ စုစုပေါငျး လေးကပျြသားကို သုံးထောငျကြျောလောကျကပြါမယျ။ အဆီတှမေို့ တျောတျောကွာကွာ သုံးရပါတယျ။
မိမိ၏အတှအေ့ကွုံကို မြှဝလေို့ ဆေးဒါနပွုလိုကျပါတယျ။ ဒူးနာကငျးဝေး ထိုငျထ မလေးစရေနျ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါသညျ။